VidtoMP3, download mumhanzi kubva YouTube for free | Gadget nhau
Maitiro ekurodha mumhanzi kubva kuYouTube neVidToMp3
Unoziva here VidToMP3? Dzimwe nguva kuuya nerwiyo kunogona kunge kusiri nyore. Kune nzvimbo dzakawanda dzekutsvaga nekurodha mimhanzi, asi nei uchitsvaga nenzira dzakasiyana kana iri paYouTube? Izvi zvinoratidzwa, uyezve, Google yatanga yavo YouTube-yakavakirwa mimhanzi yekushambadzira chikuva. Iye zvino: Tinotora sei mimhanzi kubva muvhidhiyo kubva pane inonyanya kuzivikanwa peji yerudzi urwu rwezviri mukati? Zvakanaka pane nzira dzakawanda, dzimwe dzadzo dzisingabviri nyore.
Kana izvo zvatinoda zviri teerera mumhanzi kubva kuYouTube Nesarudzo dzakawanda, zvingave zvirinani kurodha pasi application yakatsaurirwa izvo kune komputa yedu. Asi kana chatiri kuda kurodha pasi odhiyo yevhidhiyo nguva zhinji, tinogona kufarira nzira yekutanga yandiri kuenda kuzasi pazasi. Iyo nzira yakapusa isingade chero kuiswa kwepurogiramu uye iri nyore kuyeuka. Paunoyedza, iwe uchaona kuti iwe unozvichengeta seyako sarudzo yaunofarira.
1 Kuwedzera "ss" pamberi pe "youtube"
4 NdiATube Catcher
Kuwedzera "ss" pamberi pe "youtube"
Ndiyo yakapusa. Kana isu tichiona vhidhiyo yatinoda kurodha pasi kana, kubva pane ichi chinyorwa, tinoda kurodha pasi odhiyo yayo, chakanakisa chinhu wedzera mavara "ss" pamberi pe "YouTube" (zvese pasina makotesheni) uye tinya Enter Enter. Izvi zvichatiendesa kune peji senge iro raunaro mupikicha yapfuura uko kwatinokwanisa kurodha vhidhiyo nenzira dzakasiyana uye zvakare muMP4 Audio. Dhawunirodha pa128kbps, yeodhiyo mhando inogona kukwana kana usiri wakanyanya purist. Icho chinongedzo chinofanira kutaridzika seichi: https: // www.ssyoutube.com/watch?v=3rFoGVkZ29w
Kuti utore kubva pawebhusaiti ino, iwe unofanirwa kungodzvanya pamuseve kurudyi kwebhatani girini rinoti "kurodha", tinya pa "Zvimwe" uye sarudza chaunoda.
Maitiro ekuburitsa odhiyo kubva kuYouTube vhidhiyo pasina kushandisa chero chirongwa uye nenzira yakapusa
Zvinenge zviri nyore senge nzira yapfuura ndeyekuenda kune iyo VidToMP3 peji uye ita zvimwe kana zvishoma zvakafanana. Musiyano chete ndewekuti, pachinzvimbo chekupinda mavara nekuenda zvakananga pawebhu, isu tichafanirwa kuenda kune peji racho mananho sezvataizokwanisa kuwana chero imwe peji rewebhu. Tichafanira chete kuenda kune webhu pazasi pemitsara iyi uye uite zvinotevera:
Namatira iyo URL yevhidhiyo iri mubhokisi.
Dzvanya pa "Download«. Ipapo ichatanga kuratidza muzana, chishandiso chiri kuburitsa odhiyo uye kugadzirira iyo faira kurodha pasi, kana chikamu chazadza chinokuzivisa iwe kuti kutendeuka kwapera
Muhwindo rinotevera tinobaya pa «Dzvanya apa kuti utore yako yekubatanidza link".
Ipapo uncheck the box uye tinodzvanya pa «Dhaunirodha MP3«. Zvakareruka, handiti?
Imwe sisitimu inoshanda pane chero inoshanda system (Windows, Mac neLinux) iri neJdownloader. Chokwadi unomuziva asi, zvikangodaro, ini ndinozorodza ndangariro dzako zvishoma. Jdownloader inoshandiswa kurodha pasi chero faira kubva chero peji rewebhu. YeYouTube zvinongedzo, chete vhura Jdownloader panguva yekuteedzera izvi zvinongedzo kune clipboard saka ivo vanoteedzera otomatiki kuJdownloader. Kana tangoteedzera muJdownloader, isu tinobaya pechipiri pane iyo faira yatinoda kurodha pasi uye sarudza «Wedzera wotanga kurodha pasi». Ichazvidhonza kwatiri isu mufaira ratakarongedza kubva kuJdownloader sarudzo.
Ramba uchifunga kuti tinogona kubaya pane yekuwedzera chiratidzo (+) kuti uone akasiyana mafaera atinogona kurodha pasi. Panyaya yemavhidhiyo, tinogona kurodha vhidhiyo, odhiyo uye mimwe mifananidzo. Mune ino kesi, isu tinosarudza odhiyo.
aTube Catcher ndeye, kune vakawanda, chishandiso chakazara kwazvo kurodha zvirimo kubva kuYouTube. Pamusoro peizvo zvinotinakidza muchinyorwa chino, chiri kurodha pasi mimhanzi, iyo inotibvumidzawo isu kutumira kunze mafaera kune imwe fomati, izvo zvinoita kuti aTube Catcher chishandiso chakasiyana-siyana. Kuti utore mimhanzi kubva kuYouTube neATube Catcher, isu tinongofanirwa kuita zvinotevera:
Isu tinonama chinongedzo mubhokisi rebhokisi.
Isu tinoratidza chimiro kubuda.
Tinobaya pa «download«. Sezvauri kuona, iyo ichatipa yakanaka yakanaka sarudzo uye ipapo isu tinofanirwa kusarudza imwe yeanoratidza maodhiyo.
chitsamba: aTube Catcher, semamwe maturusi mazhinji, iko kushanda kwemahara, asi kunofanirwa kuve kunobatsira. Kuti uite izvi, isa chishandiso muwebhu bhurawuza rako kana usingaiteerere kuisiti yekuisa. Izvo iwe zvaunofanirwa kuita kuramba aya marudzi ezve kupihwa, ayo ari muATube Catcher ari maviri (kana ini ndinowana maviri). MuWindows iwe unogara uchifanira kungwarira neizvi.
Izvo hazvigone kuve nyore nakidzwa nekuteerera kwemavhidhiyo ako inosarudzwa nemidziyo iyi yatakataura nezvayo, pamusoro pekuti iyo faira yatinotora pasi ichauya .mp3 fomati, kana yakafanana, yakanaka sezvo ichitora nzvimbo diki, inoburitswa nemazhinji emidziyo uye mhando yeodhiyo iri mukati me zviyero.
Kana iwe uchida kutsvaga dzimwe nzira dzeku dhawunorodha mavhidhiyo akareba ewadhi uye mimhanzi yaunofarira, usapotsa yedu gwara rekutora mavhidhiyo ewadhi kubva kune chero chishandiso.
Ndeipi nzira yekutora mavhidhiyo kana mimhanzi kubva kuYouTube iwe yaunofarira? Nekuda kwekuita kwayo kwakawanda uye nekuti yanga ichishanda pasina matambudziko kwemakore akati wandei, VidtoMP3 ndeimwe yezvatinoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Software » Maitiro ekurodha mumhanzi kubva kuYouTube neVidToMp3
yatove lotube asi ndakarasa ndiyo yakakwira kudhawunirodha asi handichakwanise kuikanda
tsvuku jesu akadaro
Ndiri kuda kurodha mumhanzi kubva kuYouTube
Pindura kuna jesusrojas
Kutora. mumhanzi kubva kuYouTube
zviri nyore kwazvo uye zvinotsanangurwa
Intel Core X: zvese zvakadzama zveiyo nyowani Intel processor mhuri
Iyo YotaPhone ichiri kurarama kwazvo, tinokuratidza iwo maratidziro echizvarwa chechitatu